သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးအုန်းဝင်းသည် (၁၁.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ လိမ္မော်ခြံကျေးရွာအနီး၊ လှိုင်ရိုးမတောင်ပေါ်ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၁၅) အတွင်းရှိ သစ်တော ထွက် ပစ္စည်းဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်၏ ပုဂ္ဂလိကသစ်မာစိုက်ခင်း (၁၀၀၀) ဧကအတွင်း စိုက်ခင်း ပြန်လည်ဆယ်တင်စိုက်ပျိုးသည့်အနေဖြင့် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မန်ဂျန်ရှားသစ်မာ စိုက်ခင်း (၁၅၀)ဧကနှင့် ၂၀၁၈ခုနစ်၊ မန်ဂျန်ရှားသစ်မာစိုက်ခင်း (၂၂၅)ဧက တို့အား ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းဝင်း အား ကမ္ဘာ့ဘဏ် မှ Environment, Natural Resources and Blue Economy ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ Mr. Christophe Crepin နှင့် အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် မှ Environment, Natural Resources and Blue Economy ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာဖြစ်သူ Mr. Christophe Crepin နှင့် အဖွဲ့ဝင်(၈)ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် UNDP Resident Representative ဖြစ်သူ Mr. Peter Batchelor အား ယနေ့ ၈-၁၀-၂၀၁၉ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သည် ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ Under-Secretary of State ဖြစ်သူ H.E. Ms. Nina Irmeli Vaskunlahti၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၅:၁၅) နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့သို့ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးအုန်းဝင်း သည် စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့ The University Center ၊ The New School ၌ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အနာဂတ်နေ့ရက်များ ရရှိရေးပုံဖော်တည် ဆောက်ခြင်း (BuildingaResilient Future Day) ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍
အမျိုးသားအဆင့် ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာကော်မတီ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ သစ်တော ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားအဆင့် ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းက
ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Saurabh Kumar လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Saurabh Kumar အား ယနေ့၁၉-၉-၂၀၁၉ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ (World Ozone Day) အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကို နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟ ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အမျိုးသားလွှတ်တော် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများမှအကြီးအကဲများ၊ ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ မွန်ထရီရယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အထောက်အပံ့အစီအစဉ် အရာရှိ Mr. Pipat Poopeerasupong (မစ္စတာပီပက် ပူးပီးရာဆုပွန်း)၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့် အအေးပေးစက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ စုစုပေါင်း(၂၀၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ကြပါသည်
အခမ်းအနားတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း က ဝါးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသည် ဝါးသယံဇာတ၏ အရေးပါပုံကို ဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ၊ ပြည်သူများ ပိုမိုသိမြင်နားလည်လာစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝါးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Tone Tinnes နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။